Version 0.2.9 – bibikely fanamboarana
Jolay 21, 2009 amin'ny tolotra Leave a Comment
Andro vitsivitsy farany nampiasaina mba hamaha bibikely sasany notaterin'ny ny mpampiasa. Full nahazoan-dalana omena ao amin'ny fanovana vatan-kazo. Tianay ny hisaotra ny rehetra izay nitatitra bibikely amintsika satria manampy antsika hanatsara ny rindrambaiko izany ho an'ny olona rehetra.
Mankafy koa izahay manohana anao sy miezaka ny hiala tsy vato unturned mba hanampy anao, dia aza misalasala ny mifandray aminay, ary raha tsy namaly ao anatin'ny fe-potoana antonony – antsoy fotsiny antsika indray!
Izahay koa nanontany momba ny fanomezana (indroa herinandro ity). Noho izany voalohany – Tamin'izay fotoana izay dia tsy manaiky vola fanomezana (Marina fa mankasitraka ny tiany hatao) fa aza manaiky vitsivitsy fanomezana endrika hafa. Manomeza antsika ny fotoana amin'ny alalan'ny fandefasana tatitra bibikely (ary na dia tsara kokoa, tampina 😉 ) , nampiely ny fahalalana momba izany plugin amin'ny alalan'ny fanoratana zavatra ao amin'ny bilaogy na ny toerana tena sehatra fiadian-kevitra, hifidy izany plugin ao amin'ny WordPress Plugin lahatahiry mba ho maro kokoa ny olona mampiasa azy ary farany – dia afaka manampy antsika mandrakariva amin'ny alalan'ny maso sy ny fandikana ity tranonkala ity ny reninao-samy hafa fiteny.
Manantena izahay fa hankafy izany ianao dikan toy ataontsika 🙂
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: bugfix, fanomezana, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin